ပေါ့ဘာ ၊ ဖာနနျဒကျဈ ၊ မာရှယျ နှငျ့ ဗနျဒီဘိချတို့ ပွနျလာမယျ့ရကျကို ယူနိုကျတကျအတညျပွု – the One Sports Journal
ပေါ့ဘာ ၊ ဖာနနျဒကျဈ ၊ မာရှယျ နှငျ့ ဗနျဒီဘိချတို့ ပွနျလာမယျ့ရကျကို ယူနိုကျတကျအတညျပွု
July 19, 2021 author one articles 0
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ပထမဆုံး ရာသီကွိုပှဲစဥျမှာ ဒါဘီကောငျတီ အသငျးကို ( ၂-၁ ) အနိုငျရခဲ့ပမေယျ့ နိုငျငံလကျရှေးစငျအသငျးတှမှော ပါဝငျယှဥျပွိုငျခဲ့တဲ့ အဓိက အမြားစုကတော့ အဆိုပါပှဲစဥျကို လှဲခြျောခဲ့ပါတယျ။
ဘရူနို ဖာနနျဒကျဈ နှငျ့ ‌ပေါလျ ပေါ့ဘာတို့က လာမယျ့ အပတျအတှငျးမှာ ယူနိုကျတကျနဲ့ လာရောကျပူးပေါငျးဖို့ မရှိကွောငျး သိရပါတယျ။
ဖာနနျဒကျဈ နှငျ့ ပေါ့ဘာတို့ ( ၂ ) ဦးစလုံးကဟာ လှနျခဲ့တဲ့ ( ၃ ) ပတျကြျောက ယူရို ( ၂၀၂၀ ) ပွိုငျပှဲ ( ၁၆) သငျးအဆငျ့ပှဲစဥျတှမှော ပျေါတူဂီ ၊ ပွငျသဈလကျရှေးစငျအသငျးတှနေဲ့အတူ ရှုံးပှဲကိုယျစီကွုံတှခေဲ့ပါတယျ။
ပေါ့ဘာက လကျရှိ ဖလျောရီဒါမှာ အားလပျရကျ အပနျးဖွနေပွေီး ဖာနနျဒကျဈကတော့ ပျေါတူဂီနိုငျငံမှာပဲ မိသားစုနဲ့အတူ ရှိနပေါတယျ။
ယူနိုကျတကျက နောကျထပျခွစှေမျးပှဲစဥျအဖွဈ ကြူပီအာ အသငျးကို စနနေမှေ့ာ အဝေးကှငျး သှားရောကျယှဥျပွိုငျဖို့ ရှိနပေါတယျ။
ရာသီကွိုလကေ့ငျြ့ရေးအစီအစဥျ ပထမ ( ၂ ) ပတျကို လှဲခြျောခဲ့တဲ့ အနျသိုနီ မာရှယျ နှငျ့ ဒှနျနီ ဗနျဒီဘိချတို့က ယခုအပတျအတှငျး အသငျးနဲ့ လာရောကျပူးပေါငျးမယျလို့ သိရပါတယျ။
မာရှယျဟာ မတျလ ( ၂၈ ) ရကျနကေ့ ပွငျသဈအသငျးအတှကျ ကစားပေးစဥျ ဒူးဒဏျရာရှိခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး ပှဲကစားနိုငျခွငျးမရှိသေးပါဘူး။
ဗနျဒီဘိချကလညျး ဒဏျရာပွဿနာကွောငျ့ နယျသာလနျလကျရှေးစငျအသငျးကနေ နှုတျထှကျခဲ့ပွီး ယူရိုပွိုငျပှဲနဲ့ လှဲခြျောခဲ့ပါတယျ။
ဆိုးရှားက မာရှယျ ၊ ဗနျဒီဘိ တို့နဲ့ ပတျသကျပွီး “ သူတို့က အဆငျသငျ့မဖွဈသေးပါဘူး ။
လာမယျ့ တနင်ျလာနမှေ့ာ ကြှနျ‌တျောတို့နဲ့အတူ ရာနှုနျးပွညျ့ လာရောကျပူးပေါငျး လကေ့ငျြ့ဖှယျရှိပါတယျ။”လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
“ ဖာနနျဒကျဈ နှငျ့ ပေါ့ဘာ လား ? သူတို့က ‌နောကျအပတျထဲမှာ လာရောကျပူးပေါငျးဖို့မရှိပါဘူး။ လာမယျ့ အပတျပွီး နောကျတဈပတျပေါ့ ”
ဗနျဒီဘိ ၊ မာရှယျ ၊ ဖာနနျဒကျဈ နှငျ့ ပေါ့ဘာတို့က ဇူလိုငျလ (၂၈ ) ရကျ အိုးထရတျဖို့ဒျမှာ ကစားမယျ့ ဘရကျဖို့ဒျနဲ့ ခွစေမျးပှဲစဥျကိုလညျး ဆကျလကျလှဲခြျောဖို့ ရှိပွီး ဇူလိုငျလ ( ၃၁ ) ရကျနေ့ ပရကျဈတနျ နဲ့ ပှဲစဥျမှာ စတငျပါဝငျလာဖှယျရှိပါတယျ။
ပေါ့ဘာ ၊ ဖာနန်ဒက်စ် ၊ မာရှယ် နှင့် ဗန်ဒီဘိခ်တို့ ပြန်လာမယ့်ရက်ကို ယူနိုက်တက်အတည်ပြု ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ပထမဆုံး ရာသီကြိုပွဲစဉ်မှာ ဒါဘီကောင်တီ အသင်းကို ( ၂-၁ ) အနိုင်ရခဲ့ပေမယ့် နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းတွေမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ အဓိက အများစုကတော့ အဆိုပါပွဲစဉ်ကို လွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။
ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ် နှင့် ‌ပေါလ် ပေါ့ဘာတို့က လာမယ့် အပတ်အတွင်းမှာ ယူနိုက်တက်နဲ့ လာရောက်ပူးပေါင်းဖို့ မရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
ဖာနန်ဒက်စ် နှင့် ပေါ့ဘာတို့ ( ၂ ) ဦးစလုံးကဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ( ၃ ) ပတ်ကျော်က ယူရို ( ၂၀၂၀ ) ပြိုင်ပွဲ ( ၁၆) သင်းအဆင့်ပွဲစဉ်တွေမှာ ပေါ်တူဂီ ၊ ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းတွေနဲ့အတူ ရှုံးပွဲကိုယ်စီကြုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်။
ပေါ့ဘာက လက်ရှိ ဖလော်ရီဒါမှာ အားလပ်ရက် အပန်းဖြေနေပြီး ဖာနန်ဒက်စ်ကတော့ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံမှာပဲ မိသားစုနဲ့အတူ ရှိနေပါတယ်။
ယူနိုက်တက်က နောက်ထပ်ခြေစွမ်းပွဲစဉ်အဖြစ် ကျူပီအာ အသင်းကို စနေနေ့မှာ အဝေးကွင်း သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ရှိနေပါတယ်။
ရာသီကြိုလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ် ပထမ ( ၂ ) ပတ်ကို လွဲချော်ခဲ့တဲ့ အန်သိုနီ မာရှယ် နှင့် ဒွန်နီ ဗန်ဒီဘိခ်တို့က ယခုအပတ်အတွင်း အသင်းနဲ့ လာရောက်ပူးပေါင်းမယ်လို့ သိရပါတယ်။
မာရှယ်ဟာ မတ်လ ( ၂၈ ) ရက်နေ့က ပြင်သစ်အသင်းအတွက် ကစားပေးစဉ် ဒူးဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ပွဲကစားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
ဗန်ဒီဘိခ်ကလည်း ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့် နယ်သာလန်လက်ရွေးစင်အသင်းကနေ နှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး ယူရိုပြိုင်ပွဲနဲ့ လွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။
ဆိုးရှားက မာရှယ် ၊ ဗန်ဒီဘိ တို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ သူတို့က အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါဘူး ။
လာမယ့် တနင်္လာနေ့မှာ ကျွန်‌တော်တို့နဲ့အတူ ရာနှုန်းပြည့် လာရောက်ပူးပေါင်း လေ့ကျင့်ဖွယ်ရှိပါတယ်။”လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
“ ဖာနန်ဒက်စ် နှင့် ပေါ့ဘာ လား ? သူတို့က ‌နောက်အပတ်ထဲမှာ လာရောက်ပူးပေါင်းဖို့မရှိပါဘူး။ လာမယ့် အပတ်ပြီး နောက်တစ်ပတ်ပေါ့ ”
ဗန်ဒီဘိ ၊ မာရှယ် ၊ ဖာနန်ဒက်စ် နှင့် ပေါ့ဘာတို့က ဇူလိုင်လ (၂၈ ) ရက် အိုးထရတ်ဖို့ဒ်မှာ ကစားမယ့် ဘရက်ဖို့ဒ်နဲ့ ခြေစမ်းပွဲစဉ်ကိုလည်း ဆက်လက်လွဲချော်ဖို့ ရှိပြီး ဇူလိုင်လ ( ၃၁ ) ရက်နေ့ ပရက်စ်တန် နဲ့ ပွဲစဉ်မှာ စတင်ပါဝင်လာဖွယ်ရှိပါတယ်။
ပယျလဈစထရီ က သူ့ကိုအဌားထပျမခဖြို့ ဆိုးလျရှားကို တောငျးဆို